Soo dejisan TweetDeck 3.8.4 – Vessoft
Soo dejisan TweetDeck
TweetDeck – software ah in ay la shaqeeyaan shabakadaha bulshada oo caan ah. TweetDeck siisaa inay helaan xogta lagama maarmaanka ah oo ka mid ah shabakadaha ugu bulsho iyo sifooyinka uu leeyahay si ay ula xiriiraan saaxiibo, u arkaan content warbaahinta, raad warka, boostada sawirada iwm software ayaa awood u leh in ay isku mar xisaab badan ee Twitter ka shaqeeyaan iyo taageerada .Wadashaqayntaas ah qalab kala duwan. TweetDeck kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan nooc tweets jir ah ama cusub, loo ogaado meesha uu saaxiibadaa iyo hesho farriimaha codka farriimaha cusub. TweetDeck sidoo kale waxa uu interface dabacsan oo loo kala qeybin karaa columns kala duwan si ay u gaaraan kormeer ugu fiican.
Taageerada shabakadaha bulshada oo caan ah
Set Great ee ka shaqeynayaan
Macluumaad Updates in-waqtiga dhabta ah
.Wadashaqayntaas La aaladaha kale ee
Maqnaashaha spam iyo advertising
TweetDeck Software la xiriira:
Webcams Isgaarsiinta Voice Software si ay u sameeyaan cod ama video baaqyo iyo soo diro fariimo qoraal ah. Waxaa jira ah .Wadashaqayntaas xiriir toos ah qalab isticmaalaha.
QQ 2.11 International iyo 6.4.12593 Standard
Chat qalab The haboon inay isgaadhsiin la yeeshaan dadka adduunka oo dhan. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isgaadhsiin la isticmaalayo wicitaanada codka iyo video ama fariimaha qoraalka ah.
English, Français, Español, Deutsch... Line 4.10.0.1237
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala adduunka oo dhan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod, wicitaanada video iyo farriimo sarrifka qoraalka.
English, Español, 中文, 日本語... TeamTalk 5.1.7
Isgaarsiinta Voice Webcams Tool si ay ula xiriiraan dadka dunida ku. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la xiriirto in hab video shir iyo in ay is dhaafsadaan macluumaadka.
Webcams Isgaarsiinta Voice The software ugu caansan inay isgaadhsiin la yeeshaan saaxiibo oo caalamka ah. Software wuxuu hubinayaa tayo sare leh ee xidhiidhka codka iyo muuqaalka ah, iyo sidoo kale is dhaafsadeen haboon ee fariimaha qoraalka ah.
Chat software The multifunction la taageero for hab maamuuska loo jecel yahay in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah oo aad saaxiibadaa iyo dadka isticmaala ka kale adduunka oo dhan.
Ares 3.1.9.4045 iyo 2.4.3
العربية, English, Français, Español... Battle.net 1.11.4.2368
Games Adeeg Ciyaarta in uu ordo kulan ka dabeylaha barafka wata. Sidoo kale software ka taageertaa awoodda ay kulan wada jir ah iyada oo internet-ka.
English, Français, Español, Deutsch... Telegram Desktop 0.9.18
Chat The helo macmiilka caan ku xidhiidhiyaa chat. Software waxay leedahay mid ah muuqaalada kuwaasi oo loo isticmaalo in shabakadaha bulshada.
English, Español, Deutsch, Português... Adobe Shockwave Player 12.2.5.195
Extensions qalab The in loo maqli karo ee multimedia iyo content interactive ee internet-ka. software The aad buu u yahay ballaarinaya fursadaha ka mid ah daalacashada caanka ah.
Saxannada Agabka awood leh in ay ka shaqeeyaan iyada oo qaabab image kala duwan ee CD iyo DVD. Sidoo kale software ka taageertaa Abuuridda sidayaal xogta bootable.
العربية, English, Українська, Français... OpenOffice 4.1.1
Office Suite xafiiska in waraaqaha qoraalka iyo miisaska shaqeeyaan. Waxa ay taageertaa tiro badan oo qaabab iyo hawlaha ay badal u tahay Xafiiska Microsoft.
English, Français, Español, Deutsch... Samsung Kies 3.2.16044.2 iyo 2.6.4.16084
Phone software The synchronizes your computer la Qalabka shirkadda Samsung. Waxay leedahay fursadaha ballaaran si ay ula shaqeeyaan qalabka iyo taageerada noocyada kala duwan ee la xidhiidha.
Carambis Driver Updater 2.4.2.9632